Tani waa sida "pill" ee iPhone 14 u ekaan karo | IPhone news
Tani waa sida "pill" ee iPhone 14 u ekaan karo
Dhammaanteen waan ognahay in isbeddelka Apple uu yahay in aad iyo aad u badan oo dhaleeceyn ah "darajada" shaashadda iPhone uu sii yaraanayo oo sii yaraanayo. Ilaa hal maalin, (qofna ma garanayo goorta) gebi ahaan baaba'a.
Oo maalintaas markay timaaddo, waxay u muuqataa in xanta ay soo jeedinayso in tan xigta iPhone 14 Waxay mar kale hoos u dhigi doontaa cabbirka darajada hadda ee iPhone 13, oo qaadanaysa qaab elliptical ah, sida kaniiniga macaanka ee aan qaato subax kasta….
Horumar Jeff grossman kaliya lagu dhajiyay koontadaada TwitterSida uu u ekaan karo shaashada iPhone 14. Waxay ku bedeshay iphone 13-ka hadda jira darajo yar oo nooca kiniinka ah, laakiin lama dareemo, way ka fogtahay.
Sida sawirka ka muuqata, inkasta oo cabbirku ka yar yahay kan hadda jira, haddana runtu waxay tahay mar haddii ay ka go'day muraayadda shaashadda, waxay qaadataa meel bannaan, runtuna waxay tahay maadaama aan la isticmaalin. iyada, waxay soo jiidataa dareen badan.
Waa run in haddii ay la mid tahay fikradda uu naqshadeeyay Grossman, waa aad uga gaaban kan hadda jira, oo ka tagaya meelo badan oo dhinac kasta ah si iOS ay ugu mashquuliso calaamado cusub oo nagu wargeliya heerka qalabka, ama xogta sida hawlwadeenka, taariikhda, heerkulka ka baxsan, isku xirka Bluetooth ama boqolkiiba batteriga, tusaale ahaan. .
Waxaa laga yaabaa in "kiniiniga" uu yahay darajada ugu dambeysa
Apple waxa ay ka shaqaynaysaa in ay meel dhigto qaar aqoonsiga biometric Shaashadda hoosteeda, sida Aqoonsiga Wajiga ama Aqoonsiga taabashada cusub. Haddii aad si dhakhso ah u hesho, darajadan u eg kaniiniga ayaa laga yaabaa inay noqoto tii ugu dambaysay ee aan ku aragno iPhone, iyo in laga bilaabo 2023, iPhone 15 horeba wuxuu lahaan doonaa shaashad buuxda oo aan lahayn "dalool".
Kaamirada hore ee waajibka ah waxay noqon doontaa tibaaxaha ugu yar, waxaana lagu dhejin doonaa qaabka sare, sidaas awgeed shaashadda oo dhan waxay ka tagaysaa bilaash. oo aan wax darajo ah lahayn. Weligay ma arki doonnaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 14 » Tani waa sida "pill" ee iPhone 14 u ekaan karo
Podcast 13x16: Waxa aan ka fileyno Apple sanadka 2022
Sida loo rakibo kordhinta cusub ee Shazam ee Google Chrome